Archive du 20190528
Fifidianana - Antananarivo Noporofoin’ny TIM fa mbola mafy izy
Noporofoin’ny Tiako I Madagasikara tamin’ny fifidianana solombavambahoaka omaly fa mbola tsy nisy nipika ny fitiavan’Antananarivo azy.
Fifidianana tao Toamasina I Ahiana hampisavorovoro
Milaza ny hanao fanambarana iombonana ireo kandida 11 amin’ny 12 izay mirotsaka hofidiana ao Toamasina.
Madagasikara - Frantsa Hihaona an’io Rajoelina sy Macron
Niala teto an-tanindrazana omaly takariva nihazo an’i Lafrantsa Filoha Andry Rajoelina. Manatanteraka fitsidihana ara-pomba ofisialy any an-toerana manomboka anio 28 mey 2019 izy.
Hanitra Razafimanantsoa Tsy hanaiky ho lembenana intsony
Rehefa nahavita ny adidy amin'ny maha olom-pirenena azy ny kandida Hanitra Razafimanantsoa tao amin` ny EPP Andavamamba dia niroso tamin'ny fitsidihana biraom-pifidianana. Nahatsikaritra izy fa somary ambany ny tahan’ny fandraisana anjaran'ny mpifidy.
Mpifidy tsy navitrika Samy tompon’andraikitra isika, hoy ny CENI
Ny 15 jona izao no hivoaka ny valim-pifidianana feno vonjimaika. Ny 01 jolay no hivoaka ny vokatra ofisialy. Hatramin’ny 1 jona no iandrasana ny tatitra.
ONG SAFIDY Tena ambany ny taham-pandraisana anjara
Amin’ny ankapobeny, ny fepetra sy ny fombafombam-pifidianana dia voahaja. Isan’ny toe-javatra nampalahelo anefa raha ny fahitan’i SAFIDY azy,
Tanàna tsy misy jiro Voatery nanampy fitaovana ireo lehiben’ny biraom-pifidianana sasany
Anisan’ny olana mbola sedrain’ireo kaominina ambanivohitra maro eto amintsika isaky ny fotoam-pifidianana tahaka izao ny tsy fisian’ny herinaratra manazava ny tanàna. Voakasik’izany manokana ny kaominina Mahereza, distrikan’Ambohidratrimo.
Basket N1 A 2019 - dingana 1 Tompondaka ny Mb2All Analamanga sy Gnbc Vaknà
Nifarana tamin’ny zoma 24 mey lasa teo ny lalao basikety fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara 2019 dingana 1 sokajy N1 A lehilahy sy N1 A vehivavy.
“Basket 3 x 3 As du Quartier” andiany faha-5 Asm sy Fantastic ary Mb2all no nahery
Nandritra ny roa andro, sabotsy 25 sy alahady 26 mey 2019 teny amin’ny kianjan’Analamahitsy Cité, no natontosana ny fifaninanana basikety 3 x 3
Romain Metanire - Barea Mpilalao mendrika indray any Etazonia
Tsy mitsahatra ny misandratra any Etazonia ilay vodilaharan’ny ekipam-pirenen’ny baolina kitra malagasy Romain Metanire.
Iker Casillas Miady amin` ny homamiadana ny vadiny
Fantatra fa miady amin` ny homamiadana ny vadin`ilay mpiambina harato malaza Iker Casillas, Rtoa Sara Carbonero,
Asa fandraharahana sy fanondranana vokatra Mbola takona i Madagasikara
Nifarana ny alahady lasa teo ilay hetsika goavana ara-toekarena « Foire International de Madagascar » na FIM andiany faha-14.
FIFIDIANANA BORIBORINTANY I
Tsy afaka nanao ny fanisam-bato ny tao Lisea Rabearivelo, Ambondrona, Amboasarikery, Mandrisoa Faravohitra ao anatin’ny Boriborintany I.
Fanafihana fiangonana tany Burkina Faso Efatra no namoy ny ainy
Nahitana trangana fampihorohoroana indray ny tany Burkina Faso omaly. Andian` olona maro no nanafika trano fivavahana kristianina iray tany an-toerana.
Japon sy Etazonia Mila ahitsy ny fifanakalozana ara-barotra
Nilaza indray ny Filoham-pirenena Amerikanina, Donald Trump, nandritra ny fanokafana ny fihaonambe iray tao Tokyo renivohitr’i Japon niaraka tamin` ny praiministra Japoney Shinzo Abe fa “varotra mandeha ila ny hifanaovan` izy ireo sy ny firenena Japoney”
Kaominina Alasora Amboarina ny toho-dranon’Andrangirika
Ela ny ela fa hasiam-panamboarana ny toho-dranon’Andrangirika ao anatin’ny kaominina Alasora.
Seranam-piaramanidina ivato Saika nipoaka ilay Airbus A 330
Raha iny nirifitra mafy teo am-pihaingana iny no namoaka setroka mainty izay tsy izy ny fiara manidina Airbus iray, avotra ihany noho ny fahamalinan’ny mpiandraikitra ny filaminana teo amin’ny seranana sy ny fahaizan’ny mpanamory.
Kolonely Zafisambatra Ravoavy “Tsy nosamborin’ny zandary izany ny lehiben’ny Distrikan’i Vohemar”
Manoloana ny vola 2 tapitrisa ariary izay niely tamin’ny tambazotran-tserasera fa saika hanodikodinanq ny safidim-bahoaka nentin’ny Lehiben’ny Distrika tao Vohémar, ka nahavoatazona azy ao any amin’ny zandary dia nandiso izany ny Kolonely Zafisambatra Ravoavy, izay talen’ny filaminana sy ny angom-baovao eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena.